Ny Nosy Canary dia ho lasa sehatra fitsapana ho an'ny havaozina | Fanavaozana maintso
Ny Nosy Canary dia ho lasa sehatra fitiliana manerantany ho an'ny havaozina
Portillo Alemanina | | Angovo azo havaozina
Ny Nosy Canary, indrindra ny Isla del Hierro, Ohatra iray amin'ny fampandrosoana ny angovo azo havaozina izy ireo. El Hierro dia afaka nandany andro maromaro namatsy ny mponina tamin'ny angovo azo havaozina ihany, fifangaroan'ny angovo azo avy amin'ny rano sy ny rivotra.
Raha jerena ny maha-zava-dehibe sy ny maha-zava-dehibe ireo zava-azo havaozina eto amin'ny planetantsika, dia ezahana hatsaraina hatrany hatrany ary misy ny fomba vaovao anaovana fanadihadiana hahomby kokoa. Pedro Ortega dia Minisitry ny Toekarena ao amin'ny Governemanta amin'ireo Nosy Canary, ary taorian'ny fihaonany tamin'ity herinandro ity tamin'ny sekreteram-panjakana misahana ny angovo avy amin'ny governemanta foibe, Daniel Navia, dia nanambara tanjona mazava izy ireo: miantoka fa ny angovo avy any ivelany dia azo sedraina araka izay azo atao ary mamadika ny Nosy Canary ho sehatra fitsapana manerantany miaraka amin'ny angovo azo havaozina any an-dranomasina.
1 Angovo azo havaozina any amin'ny Nosy Canary
2 Fambolena rivotra
Angovo azo havaozina any amin'ny Nosy Canary
Mba hanatsarana ny angovo azo havaozina dia tsy maintsy atao andrana sy fanandramana hanatsarana ny fitaovana, ny fomba nananganana azy, sns. Noho izany mihatsara sy mandaitra amin'ny fahazoana angovo azo havaozina ary amin'ny fampiasana tsara ny loharano voajanahary toy ny rivotra, masoandro ary ny hafa. Ny Nosy Canary dia mankafy ny rivotry ny varotra saika mandritra ny taona mandavantaona, ka mahatonga azy io ho faritra mety hivoatra amin'ny angovo sy ny rivotra avy any ivelany.
Araka ny fantantsika, ny herin'ny rivotra avy any ivelany dia mahomby amin'ny lafiny habaka sy ny herin'ny famokarana herinaratra. Midika izany fa isaky ny te hanatsara bebe kokoa isika hampitomboana ny fahafahan'ny famokarana herinaratra.
Ny minisitry ny toekarena, indostria, varotra ary fahalalana an'ny governemanta Canary Islands, Peter Ortega, sy ny minisitry ny lefitra misahana ny indostria, angovo ary ny varotra, Adrián Mendoza, dia nanaiky tao Madrid niaraka tamin'ny sekreteram-panjakana misahana ny angovo, Daniel Navia, fa hiresaka ny fepetra hamoronana lavanty vaovao ahafahan'ny angovo sy ny fotovoltaika entin'ny rivotra izy ireo. handefa ny lahatsoratra any amin'ny Kaomisiona momba ny tsenan'ny fifaninanana nasionaly alohan'ny 31 Jolay.
Ny fihaonana dia niresaka momba ny olana isan-karazany toy ny fandinihana indray ny vola izay ampiasaina amin'ny fifandraisana elektrika eo amin'ireo nosy. Miaraka amin'ireo teti-bola sy vola ireo Tetikasa R&D maromaro mifandraika amin'ny angovo azo havaozina sy ny fitehirizany no azo atomboka. Ny iray amin'ireo lesoka lehibe amin'ny fanatsarana ny havaozina sy ny fahombiazany dia ny fitehirizana sy ny fitaterana angovo. Mora ny famokarana angovo, saingy fanamby ny fitaterana ny angovo izay novokarina tamin'ny halavirana lavitra, ary ankoatr'izay dia tehirizina hohanina any aoriana any. Izany no antony maha-zava-dehibe ny tetikasa fikarohana sy angovo azo havaozina amin'ny fampitomboana ny fahafahany mitahiry.
Pedro Ortega dia nanamafy fa ny faritry ny ranomasin'ny nosy Canary dia miavaka amin'ny fiatrehana ny tetik'asa R&D, satria mamela ny fampandrosoana ny prototypes. Noho ny rivotry ny varotra dia mamokatra tokoa ny herin'ny rivotra. Etsy ankilany, ny habe sy ny tanjaky ny masoandro amin'ny tany kanadiana dia midika fa ny famokarana angovo avy amin'ny masoandro dia mety hisy vokany tsara koa. Nandritra ny fihaonana dia natsangana ny laharan'ny asa mba hahatonga ny Nosy Canary ho tonga lafatra hamoronana sehatra fitsapana manerantany miaraka amin'ny angovo azo havaozina eny an-dranomasina.
Ny tanjon'ny nosy canary 2025 (stratehiya amin'ny angovo any nosy canary 2015-2025) dia ny fahazoana anjara azo havaozina 45% amin'ny fifangaroan'ny herinaratra ao amin'ny nosikely (Tamin'ny taon-dasa dia 7,56, raha ny angom-baovao ofisialy avy amin'ny governemanta kanadiana).
Tany am-piandohan'ny mpanao lalàna PP dia nahavita nanala ny iray amin'ireo sakana lehibe izay nanakana ny fampandrosoana ny fanavaozana ny Nosy Canary Androany, ny Nosy Canary dia manana toeram-piompiana misy rivotra 49, manana tanjaka 436,3 megawatts. Ny fampivelarana ny sehatra fampandrosoana ny fikarohana dia ahafahana miditra amin'ny angovo azo havaozina mifandraika amin'ilay taranaka mety hitombo hatramin'ny 9,9 ka hatramin'ny 21% -n'ny fitaky angovo tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny Nosy Canary dia ho lasa sehatra fitiliana manerantany ho an'ny havaozina
Hodinihin'ny governemanta ny tombom-barotra azo havaozina miverina amin'ny 2020
Ny angovo azo havaozina dia mamorona asa efa ho 400000 any Alemana